mairie-antananarivo – CUA : fizarana lanterne maimaimpoana ho an’ny taxi
CUA : fizarana lanterne maimaimpoana ho an’ny taxi
Androany tolankandro dia nisy ny valan-dresaka izay natao tamin’ny mpanao gazety tao amin’ny Lapan’ny Tanàna Analakely mikasika ny fametahana ny « Lanterne » vaovao amin’ny Taxi ville. Homena lanterne vaovao maimaimpoana ireo taxi eto Antananarivo Renivohitra, izany dia fiaraha-miombon’antoka eo amin’ny CUA, ny FTAR fikambanan’ny Taxi Antananarivo Renivohitra, ary ny orinasa tsy miankina manao ity lanterne manara-penitra iraisam-pirenena ity.
Nitarika izany tafa tamin’ny mpanao gazety izany ny Talen’ny fahafahana mifamoivoy an-tanàn-dehibe na ny mobilité ao amin’ny CUA, colonel Rakotoarivony Marie William sy ny filohan’ny FTAR, Raharinirina Clémence sy ireo Filoha Lefitra 2 ny fikambanana. Ny fitantanana fifamoivoizana eto amin’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra sy ny fikambanan’ny Taxi Ville dia hanatsara ny fitaterana fiara karetsaka eto Antananarivo Renivohitra, natao koa izao fizarana lanterne maimaimpoana izao ho ady atao amin’ireo taxi tsy ara-dalàna koa.
Nanaiky sy nanapa-kevitra ireo ao amin’ny FTAR fa hovaina vaovao ny «LANTERNE » taxi ville eto Antananarivo rehetra ary izy ireo ihany no hitsinjara izany lanterne izany amin’ireo taxi-dalàna, mba haha-matihanina hatrany ity seha-pitaterana ity. Noho izany dia hisy ny fanofanana indray ireo mpamily rehetra, efa manana « Capacité » teo aloha, ary ireo tanora amin’izao fotoana dia homena fiofanana, izany dia hiarahana miasa amin’ny OMAVET. Mitaky fanatsarana fiara ny kaominina amin’izany ka ireo fiara lany ao amin’ny « visite tekinika » ihany no hahazo izany.
Marihana ihany koa fa maimaimpoana ny fizarana izany tsy misy vola aloa fa fiaraha- miasa amin’ny mpiaramiombon’antoka no nahazoana azy. Efa misy marika « Hologramme » sy puce ny « LANTERNE » rehetra ary hahitana ny mombamomba azy rehetra toy ny : anarana, karapanondro, licence, carte grise…sns noho izany dia tsy afaka omena olona izy io fa tsy maintsy anao manokana ihany ; ary hisy fisavana hataon’ny mpitandro filaminana. Mandram-piandry izany asa izany eo amin’ny volana vitsivitsy dia mbola manana fotoana ny mpamily sy ny tompon’ny fiara hanatsara ny fiarany.
Nilaza ny filohan’ny fikambanana FTAR fa misy tombontsoa ho azy ireo manokana ny fampiasana azy io ; hisy ny vola miditra amin’ny fiara tsirairay isaky ny efa-bolana amin’ny filanjana ny LANTERNE misy dokambarotra.
Araka izany dia manentana sy manome fisaorana ho an’ny 3p, ny fikambanan’ny taxi , ny CUA amin’ny alalan’ny talen’ny fitaterana ary manentana ny mpitondra taxi amin’ny fanatsarana sy fanajana ny « code de la route » sy mba hahazo tombontsoa ny mpanjifa.